Projects kubudikidza Dino Cattaneo
mubvunzo Projects kubudikidza Dino Cattaneo
2 makore 2 ago - 2 makore 2 ago #393 by Colonelwing
Good zuva Gentelmen,
Nokuti avo wenyu (Fast unomutsa Jockey; s) kuti vanokoshesa murwi Jets muupenyu chaihwo,
Pano ari munhu Ndakavimba chivimbo mumakore akawanda vanoenda kutevedzera vamwe
upenyu chaihwo varwi USA Military varidzi panguva ino ...
LOCKHEED MARTIN F-35 mheni II
Iri Gentelman zita Dino Cattaneo ndomumwe yakanakisisa munhu pane kuti
chinhu chaicho kupinda chaiye zvinobhururuka michina iri Simulators nhasi nokuda FREE.
Edza izvi kuchinja & Kutara naro.
Ivai guru inotakura musungo zuva Gentelmen ...
IndiaFoxtEcho Kutarisana Simulations
Flight Simulation zvirongwa kubudikidza Dino Cattaneo. Current kumusha T-45C Goshawk, F-14D Tomcat, S-3B Viking uye F-35 Mheni II zvirongwa nokuda Flight Simulator X: Yechipiri uye Prepar3D v3.0. Uyewo: mafungiro, wongororo zvakawanikwa pamusoro kuzvivaraidza ndege simulation uye ndege mitambo uye.
2 makore 2 ago #395 by superskullmaster
Hongu ini naiye vakakurukura neshure pamusoro vamwe kuchinja yandakaita kuna F-35 nokuda yepamusoro realism. Payware unhu chokwadi.
2 makore 2 ago - 2 makore 2 ago #402 by Colonelwing
Good zuva superskullmaster ,,,
Nguva dzose kunakidzwa 35B VTOL kuti usiku Carrier kumhara pamusoro logbook rangu ...
2 makore 2 ago #410 by Gh0stRider203
Love Tomcat wake
2 makore 2 ago #414 by Colonelwing
Ini have'nt tarisa kuchovha ari NATOM ,,
asi kana ayo wakafanana F35 uye T45 ,, ivo vaita zvakanaka nechokwadi.
2 makore 2 ago #422 by Gh0stRider203
murwi chete ndava nokusingaperi here yakadzikiswa chaiva Tomcat elnaz
2 makore 2 ago #425 by Colonelwing
Une mutakuri misungo zvakaitika ... Just kubvunza ...
2 makore 2 ago #427 by Gh0stRider203
Patova kwekanguva elnaz Ndiri AIVA makwikwi saka handina nguva yakawanda kuti chinhu zvinopfuura zvebhizimisi elnaz
DZIMWEWO haasi kubatsira Handichaoni kamuti uye throttle. Ini kushandisa kiibhodhi nokuda MOST zvose. Ini tekisi kubvisa uye nyika vachishandisa Dreamcast Style controller kuti ane USB connector elnaz
2 makore 2 ago #430 by Colonelwing
Ndiko nzira ,,, chero bedzi imi kunakirwa kuti nzira yokuita ,, zvayo chinhu chakanaka!
Time chokusika peji: 0.243 mumasekonzi